Izvozvi yave kuwanikwa kurodha pasi nekuisa iyo nyowani vhezheni yeFirefox 72 | Linux Vakapindwa muropa
Izvozvi yave kuwanikwa kurodha pasi uye nekuisa iyo nyowani vhezheni yeFirefox 72
Iyo itsva vhezheni yeFirefox 72 webhu bhurawuza yaburitswa, pamwe nenhamba mbozhanhare yeFirefox 68.4 yeiyo Android chikuva. Pamusoro pezvo, gadziriso yakaburitswa yeiyo yakareba-nguva yekutsigira vhezheni ye68.4.0.
Mune iyi vhezheni itsva yeFirefox 72 shanduko dzinoverengeka dzinooneswa yatingawana izvozvo kutsigira kwekuyedza kweiyo HTTP / 3 protocol kwawedzerwa iyo yakavakirwa pane neqo, yakanyorwa mumutauro weRust kune mutengi uye sevha kuitisa iyo QUIC protocol (HTTP / 3 inomiririra kushandiswa kwequic protocol sekufambisa kweHTTP / 2). Kugonesa kutsigira kunogona kuitwa mu pamusoro: config, mune sarudzo «network.http.http3.enabled").
Imwe shanduko izvo zvinotaridzika kubva pane iyi nyowani vhezheni yeFirefox 72 zviri maererano zvinodiwa zve lCalifornia Consumer Yakavanzika Mutemo (CCPA), kugona kubvisa telemetry dhata kubva kumaseva eMozilla kwawedzerwa.
Iyo data inobviswa mune nyaya yekuramba kutora telemetry muchikamu "nezve: zvaunofarira # kuvanzika"(" Firefox Dhata Yekuunganidza uye Use "). Pano kana bhokisi rekutarisa rajekeswa Mozilla inobvisa zvese mukati memazuva makumi matatu ekuita saizvozvo.
YeLinux uye macOS, kugona kuona vhidhiyo mu "Mufananidzo-mu-Mufananidzo" maitiro kwawedzerwa, iyo inobvumidza iwe kuti utarise vhidhiyo muchimiro chewindo rinotenderera, iro rinoramba richioneka paunenge uchitsvaga mubrowser.
Kuti uione mumamiriro aya, iwe unofanirwa kudzvanya pane iyo pop-up ruzivo kana pane mamiriro ezvinyorwa inoratidzwa kana iwe ukanyatso-baya vhidhiyo, sarudza "Mufananidzo muPikicha" (paYouTube, iyo inotsiva mamiriro ayo emenu mutongi, tinya-kurudyi kana kurudyi-kurira. Shift yakatsimbirirwa).
Imwe yeshanduko yakaitwa yaivee kubvisa kugona kusunga veruzhinji makiyi (PKP, yeruzhinji kiyi yekupina), iyo inobvumidza iwe kuti ushandise iyo HTTP Ruzhinji-Kiyi-Pini musoro kuti ujekese zvakajeka zvitupa zvechiremera zvitupa zvinotenderwa kushandiswa kune yakapihwa saiti.
Zvikonzero zveizvi ndizvo zvakaderera kudiwa kweiri basa, njodzi yekuenderana nenyaya (PKP rutsigiro yakamiswa muChannel), uye kugona kuvhara yako pachako saiti nekuda kwekubatanidza makiyi asiri iwo kana makiyi akarasika (semuenzaniso, netsaona kubviswa kana kukanganisa nekuda kwekubira).
Mukuwedzera kune zvitsva uye kugadzirisa gomba muFirefox 72, 20 kudzvinyirirwa kwakagadziriswa, ayo gumi nerimwe (akanyorwa pasi peCVE-11-2019 uye CVE-17025-2019) akaratidzirwa seanogona kutungamira mukuitwa kwekodhi yakaipa kana uchivhura mapeji akagadzirwa.
Si iwe unoda kuziva zvakawanda nezve nhau yeiyi vhezheni itsva yeFirefox 72, unogona kutarisa chinotevera chinongedzo.
Maitiro ekuisa kana kugadzirisa iyo nyowani vhezheni yeFirefox 72 paLinux?
Izvo zvakakosha kuti utaure kuti mazhinji ekuparadzira kweLinux ane iyo Firefox package mune avo ekuchengetera, saka kuwanikwa kweshanduro iyi nyowani kunogona kutora mazuva mashoma.
Zvisinei, zvinokwanisika kuwana iyi vhezheni itsva nenzira inokurumidza. Ndozvazviri yeUbuntu, Linux Mint kana vamwe vashandisi vanobva kuUbuntu, Ivo vanokwanisa kuisa kana kugadzirisa kune iyi nyowani vhezheni nerubatsiro rweBrawuza PPA.
Vakaita izvi izvozvi ivo vanongofanirwa kuisa ne:
sudo snap install firefox-72.0.snap
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Izvozvi yave kuwanikwa kurodha pasi uye nekuisa iyo nyowani vhezheni yeFirefox 72
ArangoDB yakavhurwa sosi yakawanda-modhi dhatabhesi system
Manjaro 19.0 KDE, ikozvino inowanikwa mune yayo yekutanga kesi vhezheni, ichaburitsa dingindira nyowani